90W « MMWeather Information BLOG
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တို့မှ မုန်တိုင်းဖြစ်လာမည့် SYSTEM များ – followup
Leaveacomment Uncategorized 90W မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာပြီးချိန် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်း-GFS MODEL
Model data အရ မုန်တိုင်း ဖြစ်လာပြီးရင် အနောက်မြောက်ဘက် ရွေ့ပြီး ကိုကိုးကျွန်းတောင်ဘက် အန်ဒါမန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအဖျားက မနက်ဖန် နေ့လည်လောက် ဖြတ်ပြီး အနောက်ဘက်ကို ရွေ့ပါမယ်၊ မုန်တိုင်းက အမည်ပေးအဆင့်ကို အခုမနက် အစောပိုင်း ၃ နာရီကျော်လောက်မှာ ရောက်နိုင်ပါမယ်၊ ည သန်းခေါင်ကျော်ရင် မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း လေပြင်းက ကုန်းပေါ်နဲ့ ပင်လယ်ပြင်မှာ အရှေ့တောင်ဘက်က လေပြင်း(တစ်နာရီ ၂၅ မိုင်လောက်) တိုက်နိုင်ပါတယ်။ အရင်က မှန်းထားသလောက် မုန်တိုင်း အားမကောင်းတော့ဘဲ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာတော့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်အထိ မရောက်နိုင်တော့ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
၉ ရက်နေ့ နေ့လည် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီခန့်မှာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲ စတင် ဝင်ရောက်ပြီးချိန်မှ စ၍ ညနေ ၃ နာရီခွဲ . . . → Read More: 90W မုန်တိုင်းအဆင့်ရောက်လာပြီးချိန် ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေခန့်မှန်း-GFS MODEL
Leaveacomment Uncategorized INVEST-90W မှ ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် သတိပေးချက် JTWC ထုတ်ပြန်
Leaveacomment Uncategorized ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည်
By mmweather.ygn, on October 7th, 2013%
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် 90W သည် အောက်တိုဘာလ(၁ဝ) ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိကာ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်များ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤ အချိန်တွင် မုန်တိုင်းသည် ကိုကိုးကျွန်းပေါ်မှ ဖြတ်ကျော်ပြီး ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်မြောက်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည် ဖြစ်ရာ မုန်တိုင်း ကိုကိုးကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်း အရွယ်အစားနှင့် အင်အားတို့ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းတောင်ပိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင် အဖျားခတ်နိုင်မည့် အခြေအနေရှိပါသည်။ (ပုံ တွင်ကြည့်ပါ)
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်သဖြင့် အပြောင်းအလဲ အနည်းငယ်သာ ရှိနိုင်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ . . . → Read More: ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တွင် အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာနိုင်မည်